Atrikasa voamarina RCGP - The Reward Foundation
Home Asa Atao RCGP Accredited
Ny Reward Foundation dia nahazo ny mari-pahaizana Accredited RCGP hanome atrikasa iray andro izay nankatoavin'ny Royal College of General Practitioners an'ny United Kingdom amin'ny Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Izahay izao dia mivarotra azy toy ny Pôrnôgrafia sy ny tsy fahampian-tsakaiza. Manome isa CPD 7 ho an'ny kinova tontolo andro sy isa 4 ho an'ny kinova antsasaky ny andro. Azonao atao ny mahazo antsipiriany bebe kokoa amin'ny làlana tsirairay na manomboka famandrihana amin'ny fipihana eo ity rohy.
RCGP dia vatan'ny mpikambana sy mpiaro ny fenitra ho an'ireo dokotera ao amin'ny fianakaviana miasa mba hampiroborobo ny fahombiazan'ny fahasalamana voalohany. Amin'ny maha-mpitsabo ankapobeny (GP) anao, andraikitrao matihanina ny fitazonana ny fahalalanao sy hitazomana ny fahaiza-manaonao amin'ny alàlan'ny Continuing Professional Development (CPD). Ny GP dia takiana amin'ny fandraisana 50 crédit (ora) mitohy fanabeazana mitohy isan-taona ho ampahany amin'ny fizotran'ny asa fanaovan'izy ireo matihanina.
The Fitsipika fototra ho an'ny fampandrosoana matihanina mitohy avy amin'ny Academy of Medical Royal Colleges dia manome torolàlana momba ny fomba tokony hataon'ny matihanina mpitsabo amin'ny CPD. Ity fampianarana ity dia mety mifandraika amin'ny fahazoana mari-bola CPD ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Colleges Medical Royal manaraka:
Faculty ny fahasalamana ara-pananahana sy ara-pananahana
Royal College of Paediatrics & fahasalaman'ny zaza
Royal College of Physicians ao Edinburgh
Royal College of Physicians ao Irlandy
Royal College of Physicians any London
Royal College of Surgeons any Edinburgh
Royal College of Surgeons any Angletera
Royal College of Surgeons any Irlandy
Faculty ny fitsaboana forensika sy ara-dalàna
Misokatra ho an'ny mpisolovava, mpanabe ary matihanina hafa koa ny lalaninay. Ny Law Society of Scotland dia manaiky azy ho an'ny CPD eo ambanin'ny protokolon-tenany.
Ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana
Ny atrikasa iray andro ataontsika dia manome fampianarana enim-bolana imaso imaso sy famakiana mandritra ny ora iray mialoha, manome trosa CPD hatramin'ny 6 ora.
Ny kinova antsasak'adin'ny atrikasa dia azo alaina amin'ny fangatahana. Ny fandaharam-pianarana feno dia azo alefa ihany koa mandritra ny antsasak'adiny mandritra ny 2 andro na mandritra ny 2 ora mandritra ny 3 andro.
Ny atin'ny fampianarana dia mifototra amin'ny porofo ary manome fotoana tsara ho an'ny fianarana sy fifanakalozan-kevitra. Manarona:
Famaritana ny olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny pôrnôgrafia
Fitsipika momba ny fiankinan-doha ny ati-doha
Fampiasana sary vetaveta sy ny vokany
Fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-batana
Ny fiatraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina - olon-dehibe sy tanora
Fanamby amin'ny fampiharana
Ny fitaovam-pampianarana dia misy ny taratasy zaraina. Hanana loharanom-pahalalana marobe amin'ny Internet ny mpanatrika, ao anatin'izany ny rohy midadasika amin'ny taratasim-pikarohana.
Raha tianao ny The Reward Foundation hanolotra an'ity atrikasa ity amin'ny fampiharana anao, Royal College na ny Birao momba ny fahasalamana, azafady mandefa taratasy kely izahay amin'ny alàlan'ny forme contact eo amin'ny farany ambany amin'ity pejy ity. Manana traikefa amin'ny fampianarana any Etazonia sy manodidina an'i Eropa izahay.